Orinasa mpamboly, mpamatsy - Mpamboatra mpamaky tany China
Miasa plastika ho an'ny traktera hitifirana teboka 3
Ny famafazana fitaovana plastika dia napetraka miaraka amin'ny traktera, mandritra ny fandidiana, ny kapila amin'ny alàlan'ny fihodinana mba hamadihana ny tany, indrindra fa izy io dia mety amin'ny fandidiana eny an-tsaha miaraka amin'ny ahitra, mololo ary tahon'ny vokatra na zavamaniry, fanoherana tany lehibe ary maro ny vato sy ny biriky sns ... eny an-tsaha. Tsara ny manapaka ny ahitra sy ny mololo, tsy hajanon'ny ahitra, ny tany na ny vato sns .. Raha ny firafitra dia azo zaraina amin'ny endrika samihafa amin'ny andiany 1LY (T); Andiany 1LY; Andiany 1LYX; 1LY (SX) andian-tsarimihetsika fiompiana vokatra plastika dia napetraka miaraka amin'ny traktera, mandritra ny fandidiana, ny kapila amin'ny alàlan'ny fihodinana mba hamadihana ny tany, indrindra fa mety amin'ny fiasa eny an-tsaha miaraka amin'ny ahitra, mololo ary tahon'ny vokatra na zavamaniry , fanoherana tany lehibe ary miaraka amina vato sy biriky maro hafa, sns. Tsara ny manapaka ny ahitra sy ny mololo, afaka tsy voasakan'ny ahitra, ny tany na ny vato sns.
Miasa mpitovo tokana
Ity dia lafiny iray tokana ho an'ny traktera mandeha 8 ~ 20hp, 12hp ~ 20hp tracteur mini.
Ny angovo famokarana ozinina ho an'ny traktera
Ny angadinomby dia napetraka tanteraka amin'ny traktera mandeha sy ny traktera kely, mandritra ny fandidiana, dia mety amin'ny fandidiana eny an-tsaha miaraka amin'ny ahitra, mololo ary tahon-javamaniry na zavamaniry, fanoherana ny tany lehibe ary vato maro sy biriky sns sns eny an-tsaha. Tsara ny manapaka ny ahitra sy ny mololo ary tsy ajanon'ny ahitra, tany na vato, sns. Mahomby amin'ny asa kalitao izany mandritra ny fiasana. Mora ny manitsy sy matanjaka.
Miasa aroa ho an'ny traktera Mini Wheel 4
Ny angadinomby dia karazana fitaovana fambolena ho an'ny fambolena. Ny angadinomby iray mihantona tanteraka, izay misy volo matevina amin'ny faran'ny vatan-kazo, mazàna mifatotra amina andiana biby fiompy na maotera izay misintona azy, ary entin'ny herin'olombelona ihany koa. Izy io dia ampiasaina hanapotehana ireo sakana amin'ny tany sy hanamboarana ny lalan-kely ho an'ny famafazana.
Rafitra maivana, fandidiana tsotra, fahombiazan'ny asa ambony
Ala, fiompiana, fiompiana, fambolena
Fe-potoana fandoavam-bola: T / T, L / C, carte de crédit